राजधानीमै कसरी घ’ट्यो यस्तो ड’रलाग्दो घ,टना? हेर्नुस् – PathivaraOnline
Home > अपराध > राजधानीमै कसरी घ’ट्यो यस्तो ड’रलाग्दो घ,टना? हेर्नुस्
admin July 1, 2020 July 5, 2020 अपराध, समाज	0
नेपाली फिल्म क्षेत्रमा अहिले एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने सिजन चलिरहेको छ । लकडाउनका समयमा घरमा बसेका कलाकारहरु आफुहरुले दिएको अभिब्यक्तिका कारण विवादित भएका छन् । केही दिन यता अभिनेत्री सामाज्ञी राज्यलक्ष्मी देवी शाह र फिल्म निर्माता तथा अभिनेता भुवन केसीबीच विवाद चलिरहेको छ ।